Metformin (850 mg) Metformin > Imithi
I-Metformin 850: imiyalo yokusebenzisa, ukubuyekezwa kanye nama-analogues
Amatafula Ehlanganisiwe, 500 mg, 850 mg, 1000 mg
Ithebhulethi elilodwa liqukethe
into esebenzayo - metformin hydrochloride (ngokuya 100% into) 500 mg, 850 mg noma 1000 mg,
ababukeli: starch 1500 (ngokwengxenye pregelatinized), povidone, croscarmellose sodium, magnesium stearate, microcrystalline cellulose,
ukwakheka kwegobolondo I-Opadry II: i-polyvinyl yotshwala (ngokwengxenye ene-hydrolyzed), i-macrogol 3350 (polyethylene glycol), i-coloring pigment (titanium dioxide (E 171), i-aluminium varnish esekelwe ku-indigo carmine (E 132), i-aluminium varnish esekwe ku-quinoline ephuzi (E 104)
Amathebulethi eluhlaza okotshwe emnyama anendawo ye-biconvex engcupheni (ngemithamo ye-500 mg ne-1000 mg).
Amathebulethi eluhlaza okotshwe emnyama anendawo ye-biconvex ngaphandle kwezingozi (umthamo we-850 mg).
Kusho ukwelashwa kwesifo sikashukela. Izidakamizwa ezinciphisa ushukela ekuphathweni komlomo. IBiguanides. I-Metformin.
Ikhodi ATX A10BA02
Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, imunca ngokushesha ipheshana lesisu. I-bioavailability engasasebenzi ngokuphelele ngu-50-60%.
I-maximum maximum (Cmax) ifinyelelwa ngemuva kwamahora amabili, ukudonsa ngokudla kwehlisa i-Cmax ngo-40% futhi kwehlise ukufeza kwayo ngemizuzu engama-35. Ukuhlushwa kwe-Plasma akudluli i-1 μg / ml.
Umthamo wokusatshalaliswa (Vd) ungamalitha angama-296-1012. Ukuxhumana ngamaprotheni e-plasma akuncane, kunganqwabelana kumaseli abomvu egazi.
Isigamu sempilo (T½) cishe amahora angama-6.5 (i-T½ yokuqala isuka emahoreni angama-1.7 kuya kwayi-3, isizinda - ukusuka emahoreni ayi-9 kuye kwayi-17). Ukukhishwa ngokusemthethweni kwe-renal kungaphezu kwama-400 ml / min.
Igcotshwa yizinso, ikakhulukazi ngesimo esingashintshiwe (isicwebezelisi sokuhlanzeka nobumfihlo bokubeletha) nangamathumbu (kuze kufike ku-30%).
Ekwehlulekeni kwezinso, imvume iyancipha ngokwesilinganiso sokuqalwa kwe-creatinine. Okwamanje, kunengozi yokuqalwa kwesidakamizwa kanye nokuxineka kwe-metformin ku-plasma kuphakama.
I-Metformin inciphisa i-hyperglycemia, ayiholeli ekuthuthukisweni kwe-hypoglycemia. Ngokungafani ne-sulfonylurea, ayivuseleli ukugcinwa kwe-insulin futhi akubangeli umphumela we-hypoglycemic kubantu abanempilo. Yehlisa bobabili izinga lokuqala le-glucose kanye ne-glucose level ngemuva kokudla ku-plasma yegazi.
Umphumela we-hypoglycemic we-metformin ungabonakala ngezindlela ezintathu:
- ukunciphisa ukukhiqizwa kwe-glucose esibindini ngenxa yokuvinjwa kwe-gluconeogeneis ne-glycogenolysis,
- Ukwenza ngcono ukuthathwa nokusetshenziswa kwe-glucose yangaphandle emisipha ngokwandisa uzwela we-insulin,
- ukufakwa okubambezayo kwe-glucose emathunjini.
I-Metformin ivuselela ukwakheka kwe-glycogen kwe-intracellular, okuthinta i-glycogen synthetase. Khuphula umthamo wokuhamba wazo zonke izinhlobo zabathutha be-membrane glucose.
Akunandaba nomthelela wayo ku-glycemia, i-metformin inethonya elihle ku-lipid metabolism: yehlisa i-cholesterol ephelele, i-lipoproteins ephansi kanye ne-triglycerides.
Kwandisa ukuzwela kwama-receptors aphathelene ne-insulin nokusetshenziswa kweglucose ngamaseli. Inqanda i-gluconeogenesis esibindini. Ibambezela ukumuncwa kwama-carbohydrate emathunjini.
Ukwelashwa nge-monotherapy noma ngokuhlanganiswa namanye ama-ejenti omlomo we-hypoglycemic.
Imvamisa, umthamo wokuqala ungama-500 mg noma ama-850 mg we-metformin izikhathi ezingama-2-3 ngosuku ngesikhathi sokudla noma ngemuva kokudla. Ngemuva kwezinsuku eziyi-10-15 zokwelashwa, umthamo kumele uguqulwe ngokusho kwemiphumela yezilinganiso zeleveli kashukela. Ukwanda kancane kancane komthamo kusiza ukunciphisa imiphumela emibi evela emgodini wokugaya ukudla.
Umthamo ophakanyisiwe uphezulu yi-3000 mg ngosuku, uhlukaniswe ngemithamo emithathu. Ekwelapheni imithamo ephezulu, iMetformin isetshenziswa kumthamo we-1000 mg. Uma kwenzeka ushintsho ekwelashweni ne-Metformin, kuyadingeka ukuyeka ukuthatha enye i-antidiabetesic agent.
Ukwelapha okuhlanganisiwe kuhlangene ne-insulin.
Ukufeza ukulawulwa okungcono kwamazinga kashukela egazini, i-metformin ne-insulin zingasetshenziswa njengezindlela zokwelapha ezihlanganayo. Imvamisa, umthamo wokuqala ngu-500 mg noma we-850 mg wesidakamizwa iMetformin izikhathi ezi-2 ngosuku, kuyilapho kukhethwe umthamo we-insulin ngokwemiphumela yokulinganisa ushukela wegazi.
Ezigulini esezikhulile Ngakho-ke, umsebenzi we-reform ongasebenzi kahle, umthamo we-metformin kufanele ukhethwe ngokusekelwe ekuhlolweni komsebenzi wezinso, okumele wenziwe njalo.
Ukwakheka komkhiqizo wokwelapha kanye nezakhiwo zawo zokwelapha
Umuthi uvimbela ukukhula kwe-polyperation yezakhi zemisipha ebushelelezi yezindonga zesistimu ye-vascular. Umphumela omuhle wesidakamizwa esimweni esivamile senhliziyo nenqubo yemithambo yembule futhi uvimbele ukuthuthukiswa kwe-angiopathy yesifo sikashukela.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ngeMetformin kungachazwa udokotela wakho kuphela ngemuva kokuhlolwa kweziguli ngokuphelele. Isikhathi sokwelashwa kanye nemithi yemithi esetshenziswayo kunqunywa ukuthi ibheke zonke izici zenkathi yesifo emzimbeni wesiguli.
Into esebenzayo yesidakamizwa yiMetformin hydrochloride. Ithebhulethi elilodwa liqukethe ama-850 mg wekhompiyutha esebenzayo. Ngaphezu kwekhompiyutha enkulu, ukwakheka kwalo muthi kufaka phakathi amakhompiyutha asizayo.
Izakhi zamakhemikhali ezakha umuthi yilezi ezilandelayo:
sodium isitashi glycolate,
Ukuthatha i-Metformin akulithinti izinga le-hormone emzimbeni womuntu, kepha kunengxenye ekushintsheni kwe-pharmacodynamics yayo, eyenzeka ngenxa yokwehla kwesilinganiso phakathi kwe-insulin nekhululekile, ukwanda kwesilinganiso somzimba womuntu phakathi kwe-insulin ne-proinsulin. Ezinye zezinyathelo ezibaluleke kakhulu ekusebenzeni kwesenzo salo muthi ukugqugquzelwa kokusebenzisa ushukela amaseli izicubu zomzimba.
Into esebenzayo ithuthukisa ukuhamba kwegazi kuzicubu zesibindi futhi isize ukusheshisa ukucubungula i-glucose ibe yi-glycogen. Ukusetshenziswa kweMetformin 850 mg kuthuthukisa izakhiwo zegazi ze-fibrinolytic. Lokhu kungenxa yokucindezela kwe-tishu plasminogen activator inhibitor.
Ukufakwa kwento esebenzayo kwenziwa kusuka ku-lumen wepheshana lesisu futhi kuyinkomba esukela ku-48 iye ku-52%. Isikhathi sokuphila sengxenye esebenzayo singamahora ayi-6.5. Into esebenzayo ikhishwa emzimbeni womuntu ngesimo sayo sokuqala. Ingxenye esebenzayo ayihlangani ne-protein complexes ye-plasma yegazi. Ukuqongelelwa umuthi kwenzeka ezinhlafunweni ze-salivary, izicubu zemisipha, izinso nesibindi. Ukukhishwa emzimbeni wezinso ezinhlotsheni zokwakhiwa komchamo.
Ngokukhula kokuphazamiseka ekusebenzeni kohlelo lomchamo, umuthi unqwabelana ezinso.
Izinkomba kanye ne-contraindication zokusebenzisa umuthi
Izinkomba eziphambili zokusebenzisa yilezi ezilandelayo:
ukuba khona kohlobo 2 lwesifo sikashukela ngaphandle kokuthambekela kwe-ketoacidosis,
ukuba khona kwesifo sikashukela lapho kungaphumeleli khona ekwelashweni kokudla,
ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 kuhlangene nokwelashwa kwe-insulin, ikakhulukazi ngesilinganiso sokukhuluphala, okuhambisana nokuvela kokuphikiswa kwesibili kwe-insulin ye-hormone.
I-contraindication eyinhloko ekusebenziseni umuthi ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2 yile elandelayo:
ukuthuthuka emzimbeni we-ketoacidosis yesifo sikashukela, isifo sikashukela noma ukoma,
ukuvela nokuthuthuka komzimba wesiguli kwezifo eziqatha ezinobungozi bokuphazamiseka kwemithambo yezinso - ukomisa, umkhuhlane, i-hypoxia, izifo ezithathelwanayo zezinso, ukuthuthukiswa kwezifo ezibangelwa yi-bronchopulmonary
ukuthuthukiswa kwezifo ezingelapheki futhi ezingalapheki ezingavusa ukuqhubeka kwe-izicubu hypoxia,
Ukungenelela okukhulu kokuhlinzwa emzimbeni kanye nesiguli esithola ukulimala komzimba okungathi sína,
ukwenzeka nokuqhubeka kokuphazamiseka ekusebenzeni kwesibindi,
isiguli sinotshwala obungamahlalakhona noma ubuthi obudakayo obukhulu,
ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis emzimbeni,
isidingo sokudla okunekhalori ephansi,
isiguli sine-hypersensitivity ezingxenyeni zomuthi.
Kuyenqatshelwa ukusebenzisa iMetformin ezinsukwini ezi-2 ngaphambi nezinsuku ezi-2 ngemuva kokuhlolwa komsakazo ngomzimba usebenzisa i-chemical i-iodine equkethe i-chemical eyakhiwe ngamakhemikhali.
Imiyalo yokusebenzisa umuthi
Ukuze wazi ukuthi uwuphuza kanjani umuthi ngendlela efanele, kufanele uthintane nodokotela wakho. Isiguli kufanele sifundwe ngemiyalo yokusebenzisa iMetformin.
Umthamo wesidakamizwa ubekwa kuphela yi-endocrinologist eye khona. Udokotela unquma umthamo wesiguli ngasinye, ngokunaka imiphumela etholakala ngesikhathi kuhlolwa umzimba futhi unaka nezimpawu zomzimba wesiguli. Umthamo umuthi umuthi okufanele uphuzwe yisiguli uhambisana nezinga le-glucose esegazini le-plasma emzimbeni wesiguli.
Ukuze uthathe iMetformin ngokunembile, umthamo wokuqala kufanele ube ukusuka ku-500 kuye ku-1000 mg ngosuku, okungamathebulethi ayi-1-2. Ngemuva kwezinsuku eziyi-10-15 zokwamukelwa, ngokwesinqumo se-endocrinologist ebuka isiguli, kunganda okunye ukwanda komthamo uma lokhu kudingekile ngokuqukethwe kweglucose ephezulu emzimbeni wesiguli.
Imiyalo yokusebenzisa itusa ukuthi usebenzise i-1500-2000 mg yomuthi njengethamo lokugcina, okungamacwecwe ama-3-4, futhi umthamo omkhulu ovunyelwe ukuthatha ngu-3000 mg ngosuku.
Endabeni yokwelashwa kohlobo lwe-2 yesifo sikashukela ezigulini esezikhulile, umthamo osetshenziswa yithuluzi lezokwelapha akufanele wedlule amaphilisi ayi-1 g noma amabili ngosuku.
Amacwecwe kufanele athathwe ngomlomo ngaphandle kokuhlafuna ngesikhathi noma ngokushesha ngemuva kokudla. Umuthi kufanele uthathwe ngenani elincane lewuketshezi. Ukuze uvimbele ukuthuthukiswa kwemiphumela emibi emzimbeni, umthamo wansuku zonke unconywa ukuba uhlukaniswe ngemithamo emi-2-3.
Kusukela lapho uthatha umuthi, kunamathuba amaningi okuthuthukisa i-lactic acidosis, umthamo osetshenziselwa ukwelashwa kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 uyancishiswa uma isiguli sinokuphazamiseka okunamandla kwe-metabolic.
Esimweni sokuphathwa kanyekanye ne-insulin ngomuthi ongeqi kumayunithi angama-40 ngosuku, irejista yomuthi ihlala ingashintshiwe. Ekwelashweni okudinga umthamo we-insulin wansuku zonke amayunithi angaphezu kwangama-40 ngosuku, irekhodi lomthamo kufanele lithathwe ngokuqapha ngokweqile. Ukukhethwa komthamo kumele kwenziwe kuleli cala esibhedlela ngaphansi kokuqashwa udokotela ohlale ekhona.
I-Metformin inciphisa kuphela ukugxila kwe-glucose kubantu abanesifo sikashukela ngaphandle kokubonisa izakhiwo zabo kumuntu onempilo.
Imiphumela emibi yesidakamizwa emzimbeni
Ngokusebenzisa isikhathi eside umuthi, kungenzeka ingozi emzimbeni wokuphazamiseka okuhambisana nokumuncwa kwe-vitamin B12.
Ngokusetshenziswa isikhathi eside kwalo muthi, kufanele kubhekwe ngokukhethekile ukuqapha isimo sokusebenza kwezicubu zezinso nezinso.
Lapho usebenzisa umuthi, imiphumela emibi elandelayo ingenzeka:
Ukusuka ekusebenzeni kwamapheshana esiswini, ukuphazamiseka kungenzeka, kuboniswe ngesimo sokubonakala komzwa wokucanuzelelwa kwenhliziyo, ukuhlanza, nobuhlungu esiswini, ukuncipha noma ukuntuleka kokudla, ukubukeka kokunambitheka kwensimbi emlonyeni.
Ukusuka esikhunjeni kukhona ukusabela komzimba ngendlela yokuqhuma kwesikhumba.
Uhlelo lwe-endocrine luyakwazi ukuphendula ukusetshenziswa komuthi ngokwakhiwa kwezimo ze-hypoglycemic. Imvamisa, izimo ezinjalo zivela ngenxa yemithamo enganele yomuthi.
Engxenyeni yokudlula kwezinqubo ze-metabolic ezimweni ezingavamile, lapho kuthatha imithamo enganele, ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis emzimbeni kungenzeka. Uma kwenzeka lesi simo, ukuqedwa komuthi kuyadingeka.
Uhlelo lokujikeleza luyakwazi ukuphendula ekwelashweni ngokwenziwa kwezinye izimo ze-megaloblastic anemia.
Ngenxa yengozi enkulu emzimbeni, ukusetshenziswa kwe-metformin lapho kukhona ukwehluleka kwezinso kumuntu kufanele kuyekwe noma kufanele kuthathwe ngaphansi kokuqashwa ngudokotela nangomthamo omncane.
Abaningi be-endocrinologists abakulesi simo batusa ukumisa umuthi ngokuphelele, futhi bawuphathe ngomthamo omncane kakhulu, ngoba ukuqapha okuqukethwe ushukela kubaluleke kakhulu.
Iqiniso ngukuthi ukwanda koshukela wegazi kungavusa ukuphazamiseka okukhulu emzimbeni okungaholela ekwandeni kokuthola umphumela obulalayo.
Imiyalo ekhethekile yokusebenzisa iMetformin
Lapho uhlela ukukhulelwa noma lapho kwenzeka, umuthi kufanele uyekwe. Uma kwenzeka ukhulelwe, ukusetshenziswa komuthi wesikhathi sokukhulelwa kuthathelwa indawo yi-insulin therapy.
Njengoba kungekho datha ekungeneni okungaba khona kwezakhi zomuthi nento esebenzayo ekwakhiweni kobisi, lapho usebenzisa ibele, ukusetshenziswa komuthi kufanele kuqedwe. Uma kunesidingo esiphuthumayo sokusebenzisa iMetformin ngesikhathi sokuqunjelwa, ukuncelisa ibele kufanele kumiswe.
Ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa akuvunyelwe ezinganeni nasentsheni engaphansi kweminyaka engu-18.
Odokotela abancomi ukusebenzisa lesi sidakamizwa ekwelapheni isifo sikashukela asebekhulile, iminyaka yabo ifinyelele eminyakeni engama-60 nokwenza umsebenzi osindayo ohambisana nokukhula kwengcindezi emzimbeni. Lesi sincomo singenxa yokuthi iziguli ezinjalo kungenzeka kakhulu ukuthi zikhule nge-lactic acidosis emzimbeni.
Endabeni yokuthatha iMetformin, ingahlanganiswa nama-ejenti asuselwa ku-sulfonylurea. Ngokuphuza izidakamizwa okuhlanganisiwe okunjalo, ukuqapha ngokucophelela isimo sesibonisi se-glucose emzimbeni kuyadingeka.
Kwenqatshelwe ukuphuza utshwala nemithi equkethe i-ethanol ngesikhathi sokuthatha umuthi. Ukuthatha iMetformin ngasikhathi sinye notshwala kungavusa ukukhula kwe-lactic acidosis esigulini esinesifo sikashukela.
Uma usebenzisa umuthi, uvunyelwe ukushayela izimoto nezinqubo, ngoba ukuphathwa kwawo akukuthinti amandla okushayela.
Izindleko zeMetformin, izinkomba zayo kanye nokubuyekezwa kweziguli ngokusetshenziswa kwomuthi
Izidakamizwa ezilandelayo ziyizifaniso zeMetformin:
Metfogamm 500, 850, 1000
Ukubuyekezwa mayelana nokusetshenziswa kwomuthi okwenziwa yiziguli ekwelapheni isifo sikashukela kubonisa ukuthi lesi sidakamizwa sinomphumela omuhle emzimbeni, okuvumela ukuthi ulawule ukugcwala kweglucose emzimbeni.
Kunezibuyekezo eziningi mayelana nomuthi okhombisa ushintsho oluhle emzimbeni lapho uthatha iMetformin noma ama-analogues ayo kanye nokuvela kwamandla amahle ekwelapheni isifo sikashukela. Imvamisa, iziguli ezinesifo sikashukela kanye nokukhuluphala kukhombisa kuzibuyekezo zazo ukuthi ukusetshenziswa kweMetformin kwinqubo yokwelapha izidakamizwa kwehlise kakhulu isisindo somzimba.
Izindleko zomuthi emakhemisi wezwe zincike esifundeni nasekufakweni komuthi.
Izindleko zomuthi iMetformin Teva 850 mg ezweni ziyisilinganiso sama-ruble ayi-100 ngephakethe ngalinye eliqukethe amaphilisi angama-30.
Umuthi onjengeMetformin Canon 1000 mg unezindleko ezimaphakathi ezweni lama-ruble angama-270 ngephakeji ngalinye, eliqukethe amaphilisi angama-60.
Izindleko zomuthi kuncike ekutheni mangaki amaphilisi asephaketheni. Lapho uthenga lo muthi, kufanele kukhunjulwe ukuthi iholidi lakhe lenziwa kuphela ngokuyalelwa ngudokotela oholayo.
Kule vidiyo ekulesi sihloko, uDkt Myasnikov uzokhuluma ngomgomo wokusebenza kweMetformin kushukela.